Famatsiana herinaratra Ac, Famatsiana herinaratra Dc, Fitaovana fiarovana amin'ny tselatra - Leihao
LEIHAO dia naorina tamin'ny Jolay 24, 2015. Ny orinasa dia ao amin'ny renivohitra elektrika ao amin'ny China-Xianyangchen Industrial Zone, Hongqiao Town, Yueqing City, Zhejiang Province. Izy io dia orinasa matihanina natokana ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana vokatra fiarovana amin'ny tselatra. , High-tech amin'ny anaran'ny fanodinana. Ny vokatray dia mandrakotra ny famatsiana herinaratra AC, DC, fiarovana amin'ny tselatra photovoltaic, fiarovana amin'ny tselatra amin'ny tambajotra, fiarovana amin'ny tselatra amin'ny vidéo, fanaraha-maso ny fiarovana ny tselatra, fitaovana fiarovana amin'ny tselatra roa amin'ny iray, ary vokatra fiarovana hafa mifandraika amin'ny tselatra.
Fitaovana fiarovana 18 Firafitra fiarovana
Ny mpiaro ny backup dia mitana anjara toerana lehibe, saingy miankina amin'ny kalitao tsara ny vokatrao. Ny kalitao tsara dia hanana anjara toerana lehibe. Tokony hampiasa ny fiarovana backup ianao mba hiarovana ny tselatra. Ny fiantraikany mivantana avy amin'ny mpiaro backup novokarin'ny LEIHAO Lightning Protection Company sy SPD dia ny fiarovana ny backup SPD dia tsy ho tapaka noho ny fiantraikan'ny tselatra;